မေး။ ။ ပြည်တွင်းမှာတရားဝင် ပါတီ တစ် ရပ် အဖြစ် ရပ် တည်ဖို့ အတွက်ဘယ်လိုပြင် ဆင် မှု တွေ လု ပ် ထားပြီးပြီ လဲ။
ဖြေ။ ။ ကြိုးစားပမ်းစား ပြင် ဆင် နေတု န်းပါပဲ။
(က) ပါတီ ရဲဘော်တွေ (အတွင်း၊ အပြင် )နဲ့ လက်လှ မ်းမီ သလောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေတယ်။
(ခ)တစ် တိုင်းပြည်လုံးအနှံ့ ဒေသအလိုက်စည်းရုံးရေးကော်မတီ တွေ စု ဖွဲ့နိုင် ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။ (ဂ) ဒီ နေရာမှာအရေးကြီးတဲ့ပါတီ ရဲ့ ရပ် တည်မှု ၊ အထွေထွေနိုင် ငံ ရေးသဘောထား၊ လု ပ် ငန်းစဉ် စတဲ့ပါတီ ရဲ့ Program တွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရင်းနဲ့ ပိုမိုပြည့်စုံစေဖို့ အခြေအနေတွေနဲ့ ကိုက်ညီ ဖို့ ပြင် ဆင် နေပါတယ်။ (ဃ) နောက်အရေးကြီးတဲ့လက်တွေ့ပြဿနာလည်းဖြစ် တဲ့ကျွန် တော်တို့ တစ် ဦးချင်းစီ ရဲဘော်တစ် ဦးချင်းစီ ရဲ့ ရပ် တည်ရေးနဲ့ ပါတီ တစ် ခု လုံးအနေနဲ့ ရပ် တည်နိုင် ရေးအတွက်ဘဏ္ဍာရေးအပါအ၀င် လိုအပ် တဲ့ အချက်အလက်တွေအတွက်နည်းလမ်းရှာဖွေနေပါတယ်။ ပြင် ဆင် နေပါတယ်။
မေး။ ။တရားဝင် ပါတီ အဖြစ် ရပ် တည်ပြီးနောက်ပိုင်း၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကိုရော ၀င် ရောက်ယှ ဉ် ပြိုင် ဖို့ အစီ အစဉ် ရှိသလား။
ဖြေ။ ။လက်ရှိတည်ဆဲဥပဒေအရဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲမှာပါတီ တစ် ခု အနေနဲ့ အနည်းဆုံး အမတ်နေရာ ဘယ်နှ နေရာဝင် ရောက်ယှ ဉ် ပြိုင် ရမယ်ဆိုတဲ့ကန့်  သတ်ချက်ရှိတယ်လို့ ထင် တယ်။ လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ် စဉ် တစ် ခု လုံးမှာလွတ်လပ် တဲ့၊ မျှတတဲ့အခြေအနေရှိဖို့ Level Playingf Field ရှိဖို့ ကျွန် တော်တို့ ရု န်းကန် ရဦးမယ်။ ကျွန် တော်တို့ ပါတီ ဟာအနှ စ် ၂၀ ကျော်ကျော်တောထဲမှာ၊ နယ်စပ် ဒေသတွေမှာ၊ တိုင်းပြည်အပြင် မှာရပ် တည်ခဲ့တဲ့နိုင် ငံ ရေးပါတီ ဖြစ် တယ်။ ကျွန် တော်တို့ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်စားလှ ယ်လောင်းတွေအဖြစ် မှ တ်ပုံတင် လို့ မရအောင် ကန့်  သတ်ထားတဲ့ တည်ဆဲဥပေဒတွေရှိပါသေးတယ်။ ဒါတွေကိုကျော်လွှားဖို့ ဆိုရင် ဖွဲ့စည်းပုံပြင် ဆင် ရေး၊ နိုင် ငံ ရေးပါတီ တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေ၊ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေမှာပါတဲ့အကန့်  အသတ်တွေကိုပြု ပြင် ပေးဖို့ တောင်းဆိုရဦးမယ်။ ရု န်းကန် ရဦးမှာဖြစ် တယ်။ ဒီ အခြေအနေတွေကိုကျော်လွှားနိုင် မှ ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင် နိုင် ရေး၊ မပါဝင် နိုင် ရေးဆိုတာကိုစဉ် စားရလိ မ့်မယ်ထင် ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကတစ် ဆင့်အပြောင်းအလဲတွေကိုဖော်ဆောင် ရမှာဖြစ် ပေမယ့် အားလုံးအတွက်၊ ကျွန် တော်တို့ အတွက်အဲဒီအခြေအနေပေး၊ မပေးက အရေးကြီးတယ်။
မေး။ ။ ပြည်တွင်းမှာတရားဝင် ပါတီ အဖြစ် ရပ် တည်တော့မယ့် နိုင် ငံ ရေး အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွေအပေါ် သဘောထားပြောပါဦး။
ဖြေ။ ။ ရှေ့ မေးခွန်းမှာကျွန် တော်တို့ သဘောထားတွေကိုဖြေခဲ့ပြီးပါပြီ ။ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကတော့နည်းနည်းထပ် ပြောချင် ပါတယ်။ ကျွန် တော်တို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကိုအနှ စ် သာရအရ ဒီ မိုကရေစီ ၊ လူ သားတစ် ဦးချင်းစီ နဲ့ ဂု ဏ်သိက္ခာကိုအာမခံ တဲ့ဥပဒေ၊ တိုင်းပြည်တွင်းမှာအတူ တကွ နေထိုင် နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသား လူ မျိုးစု အတွက်၊ နောက်လူ နည်းစု တွေရဲ့ တန်းတူ ရေးကိုအာမခံ တဲ့ဥပဒေအဖြစ် ပြင် ဆင် ဖို့ လိုပါတယ်။
မေး။ ။ ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတု န်းက ဒု တိ ယလိုက်ခဲ့တဲ့ပါတီ အနေနဲ့ပြန် လည်ရပ် တည်မယ်ဆိုရင် အရင် လိုနိုင် ငံ ရေးသြဇာရရှိအောင် ဘယ်လိုပြန် လည်ထူ ထောင် မယ်လို့ စိ တ်ကူးသလဲ။
ဖြေ။ ။ (က) ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတု န်းက ဒု တိ ယလိုက်ခဲ့တဲ့ပါတီ ဆိုတာ မဟု တ်ပါဘူး။ ပါတီ တည်ထောင် ပြီးစ ၁၉၈၈ာင်းပိုင်းနဲ့ ၁၉၈၉ ခု နှ စ် အစပိုင်းတွေမှာအင် အားအရ၊ ပါတီ ရဲ့ လှု ပ် ရှားနိုင် မှု ၊ ပြည်သူ လူ ထု အများစု ရဲ့ စိ တ်ဝင် စားမှု ၊ နိုင်ငံ တကာရဲ့စိ တ်ဝင် စားမှု အရှိန် အဟု န် နဲ့ ရရှိခဲ့တယ်။ နိုင် ငံ ကြီးအချို့ရဲ့ သံ ရုံးအစီ ရင် ခံ စာတွေမှာဒု တိ ယအင် အားအကြီးဆုံးပါတီ အဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ကြတယ်။ ပါတီ ကိုရဲဘော်မိုးသီးဇွန် ဦးဆောင် စဉ် ကာလတု န်းကပါ။ အဲဒီ လိုနိုင် ငံ ရေးအရ အရှိန်အဟု န် ကြီးမားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေရှိတယ်။ အဲဒီ အကြောင်းရင်းတွေက. . .
၁။ ပါတီ ဟာ ရှ စ် လေးလုံး ဒီ မိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကြီးအတွင်းမှာသန္ဓေ တည်ခဲ့ပြီးအရေးတော်ပုံတပ် သားတွေက နေရာအနှံ့မှာဦးဆောင် စု စည်းခဲ့လို့ . .
၂။ အဲဒီ ကာလက စစ် အစိုးရအပေါ် ပြတ်ပြတ်သားသား ရှု မြင် ရပ် တည်ခဲ့လို့ အစိုးရကလည်း ပြင်းပြင်းထန် ထန် ဖိ နှိပ် ခဲ့လို့ …
၃။ နိုင် ငံ ရေးပါတီ တစ် ရပ် ဆိုတာထက်ကျောင်းသား၊ လူ ငယ်တွေရဲ့ လှု ပ် ရှားမှု ၊ ဒီ မိုကရေစီ ရေးလှု ပ် ရှားမှု (Democracy Movement) အဖြစ် ခိုင် ခိုင် မာမာရပ် တည်ခဲ့လို့ . ..
၄။ လူ ထု ရဲ့ အခြေခံ လိုအပ် ချက်တွေကိုနေရာအနှံ့ မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ဖော်ထု တ်တိုက်ပွဲဝင် ခဲ့လို့ . ..
၅။ အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ရှ စ် လေးလုံး ဒီ မိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကြီးရဲ့ အရှိန် (Momentum) က အဲဒီ ကာလတွေမှာအားကောင်းဆဲပဲဖြစ် ခဲ့လို့ ဖြစ် တယ်လို့ ကျွန် တော့် အနေနဲ့ ယူ ဆတယ်။ အခြားအချက်အလက်တွေ ရှိနိုင် ပါသေးတယ်။
(ခ) ဒီ နေ့ ကာလပါတီ တည်ဆောက်ရေးကိ စ္စ တွေကတော့ပိုပြီးအခက်အခဲတွေနဲ့ တွေ့နိုင် တယ်။ အရင် ကလို
Momentum မျိုးရနိုင် ဖို့ နောက်ခံ အခြေအနေကလည်း အတော်ကွာခြားသွားပြီ ။ သို့ သော်လည်း ဘယ်လောက်ပဲ ခက်ခဲခက်ခဲ ရင် ဆိုင် ရမှာ၊ ကျော်လွှားရမှာ၊ တည်ဆောက်ရမှာက ယနေ့ ပါတီ ကိုတာဝန် ယူ ထားတဲ့ကျွန် တော်တို့ ရဲ့ တာဝန် ပါပဲ။ကျွန် တော်တို့ ပါတီ ကိုသိ ပ် သည်းကျစ် လျစ် ပြီးအရည်အချင်းကောင်းတဲ့ပါတီ တစ် ရပ် ၊ ပြည်သူ ကိုတကယ်ပဲ အလု ပ် အကျွေးပြု တဲ့ပါတီ တစ် ရပ် အဖြစ် တည်ဆောက်လိုတယ်။ သိ ပ် သည်းကျစ် လျစ် တဲ့ပါတီ လို့ ပြောပေမယ့် ပါတီ ကိုနိုင် ငံ ရေးအရရင့်ကျက်မှု ရှိတဲ့ပညာတတ်ပု ဂ္ဂို လ်(Intellectual) အချို့ကပဲ စု စည်းတဲ့ပါတီ မျိုးမဟု တ်ဘဲနဲ့ တန်းတူ ရေး၊ တရားမျှတမှု ၊ ငြိမ်းချမ်းမှု နဲ့ ဒီ မိုကရေစီ ရေးအတွက်ရု န်းကန် ကြိုးစားနေကြတဲ့လူ့  အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အလွှာအသီးသီးထောင့်အသီးသီးက တက်ြ ကွလှု ပ် ရှားသူ တွေနဲ့ စု စည်းတဲ့ပါတီ ၊ အဲဒီ တက်ြ ကွလှု ပ် ရှားသူ တွေရဲ့ ပါတီ အဖြစ် တည်ဆောက်လိုတယ်။ အဲဒါကိုဦးတည်ပြီးတည်ဆောက်သွားမယ်။ ဒါဆိုရင် ကျွန် တော်တို့ ပါတီ အနေနဲ့ နိုင် ငံ ရေးအရ ဂု ဏ်သိ က္ခာရှိတဲ့ပါတီ တစ် ရပ် အဖြစ် ပြည်သူ ကိုတကယ်ပဲ လက်တွေ့မှာအလု ပ် အကျွေးပြု တဲ့ပါတီ တစ် ရပ် အဖြစ် ရပ် တည်လာနိုင် လိ မ့်မယ်
မေး။ ။နိုင် ငံ ရေးသမားတစ် ဦးချင်းစီ ရဲ့ အရည်အချင်းအပြင် ပု ဂ္ဂို လ်ရေးယုံကြည်အားကိုးမှု နဲ့ ပေါ်လွင် ထင် ရှားမှု အပေါ် မူ တည်ပြီးလူ ထု အကြိုက်ကွဲပြားနေတဲ့ပြည်တွင်းနိုင် ငံ ရေးအခြေအနေတွေအပေါ် ဦးအောင် မိုးဇော်ဘယ်လိုယုံကြည်မှု နဲ့ ပြန် ခြေချမလဲ။
ဖြေ။ ။(က) ကျွန် တော့် အနေနဲ့ ရော ကျွန် တော်တို့ ပါတီ အနေနဲ့ ရောပေါ့နော်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ နိုင် ငံ ရေးလှု ပ် ရှားမှု ၊ ဒီ မိုကရေစီ ရေးလှု ပ် ရှားမှု ထဲက နေပြီးတစ် ခါမှ အချိ န် အချို့လောက်တောင် မှ အပြင် ကိုရောက်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒီ လှု ပ်ရှားမှု ထဲမှာပဲ အရွယ်ရောက်စကနေ ယနေ့ အထိ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းရှိနေခဲ့တာပါ။ ဒီ အတွက်“ပြန် လည်ခြေချ” ဆိုတဲ့စကားအသုံးအနှု န်းကတော့ကျွန် တော်အတွက်ပြဿ နာရှိပါတယ်။
(ခ) ယနေ့ ကျွန် တော်တို့ တိုင်းပြည်ဟာ ခိုင် မာတဲ့ဒီ မိုကရေစီ အသွင် ကူးပြောင်းရေးကိုမိ မိ ရရ မဆု ပ် ကိုင် နိုင် သေးဘူးဖြစ်တယ်။ ခိုင် မာတဲ့ငြိ မ်းချမ်းရေးကိုမတည်ဆောက်နိုင် သေးဘူးဖြစ် တယ်။ ဒီ အတွက်လည်း တိုင်းပြည်ဖွံ့ ဖြိုး တိုးတက်မှု လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုမရောက်သေးဘူး။ ဒီ အတွက်အလု ပ် လု ပ် စရာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ကျွန် တော်တို့ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေနဲ့ လက်တွဲပြီးခု နကကိ စ္စ တွေကိုကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသလောက်လု ပ် ကိုင် နိုင် လိ မ့်မယ်။ အခက်အခဲတွေကိုကျော်ဖြတ်နိုင် လိ မ့်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။
(ဂ) အချို့ကျွန် တော်တို့ ရဲ့ သက်တူ ရွယ်တူ မျိုးဆက်တူ တွေရဲ့ ပြောဆိုချက်တွေကိုကြားနေရ တယ်။ ၂၀၁၅ အလွန် နိုင်ငံ ရေး ၊၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲစသည်ဖြင့်အဲဒီ အတွက်လူ ပု ဂ္ဂို လ်တွေအပေါ် မူ တည်ပြီးသုံးသပ် ပြောဆိုကြနေကြတယ်။ ကျွန် တော်တစ် ဦးတည်း အနေနဲ့ ဖြစ် ဖြစ် ၊ ပါတီ အနေနဲ့ ဖြစ် ဖြစ် အဲဒီ ပြောသံ ဆိုသံ တွေကိုနားမလည်သလိုစိ တ်လည်း မ၀င် စားဘူး။ ကျွန် တော့် စိ တ်ဝင် စားမှု ကကျွန် တော်တို့ ပါတီ ကိုParty Platform အပေါ်မှာအခြေခံ စု စည်းတဲ့ပါတီ ဖြစ် အောင် သိ ပ် သည်းကျစ် လျစ် အရည်အသွေးကောင်းတဲ့
ပါတီ ဖြစ် အောင် ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတာပဲ။ နောက်အခြားနိုင် ငံ ရေးပါတီ တွေကိုရော ကျန်းမာသန် စွမ်းတဲ့ပါတီ တွေဖြစ် အောင် ဘယ်လိုကူ ညီ နိုင် မလဲ၊ ဘယ်လိုပူးပေါင်းပြီးအခြေအနေတွေနဲ့ ကိုက်ညီ တဲ့နိုင် ငံ ရေး ပါတီ စနစ် (Party System) ကျွန် တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာပေါ်ထွန်းလာအောင် ဘယ်လိုကြိုးစားကြမလဲ ဆိုတာပါပဲ။ အခု Nation Building တို့ State Building တို့ ပြောဆိုနေကြတာရှိပါတယ်။ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ကိုယ်စိ တ်ဝင် စားတဲ့အပိုင်းမှာကိုယ်တတ်စွမ်းသရွေ့အု ပ် တစ် ချပ် ဖြစ် ဖြစ် သဲတစ် ပွင့်အနေနဲ့ ဖြစ် ဖြစ် ၊ ပါဝင် ဆောင် ရွက်သွားချင် ပါတယ်။
(ဃ) နိုင် ငံ ရေးမှာခေါင်းဆောင် တွေ၊ လူ ပု ဂ္ဂို လ်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍအရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန် တော်တို့ တိုင်းပြည်အတွက်ဆိုပိုပြီးလိုအပ် နေသေးတယ်။ အဲဒီ လူ ပု ဂ္ဂို လ်တွေ ၊ ခေါင်းဆောင် တွေရဲ့ သဘောထားတွေက တိုင်းပြည်ရဲ့ ကံ ကြမ္မာအပေါ်သက်ရောက်တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့အဆိုးတွေထဲက အကောင်းလို့ ပြောရမလား မသိ ဘူး။ ကျွန် တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာဒေါ်အောင် ဆန်းစု ကြည်လိုကိုမင်းကိုနိုင် လိုခေါင်းဆောင် မျိုးတွေကိုရရှိထားတာပါပဲ။ အချို့က ဒီ လိုပု ဂ္ဂို လ်မျိုးတွေရဲ့ အရှိန် သြဇာကိုမလွန် ဆန် နိုင် တော့ပု ဂ္ဂို လ်ရေး ကိုးကွယ်မှု ၊ ဆည်းကပ် မှု တို့ ဆိုတာတွေကိုရေတိုအမြင် နဲ့ ပုံကြီးချဲ့နိုင် တယ်။ အပြစ် တင် နိုင် တယ်။ ကျွန် တော်ယုံကြည်တာက ဒီ ခေါင်းဆောင် တွေရဲ့ အရှိန် အ၀ါတွေဟာ ကျွန် တော်တို့ လိုချင် တဲ့နိုင် ငံ ရေးယဉ်ေ
ကျးမှု ကိုတည်ဆောက်သွားဖို့ အရမ်းအခရာကျတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ကျွန် တော်တို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဒီ မိုကရေစီ ရေး ရေချိ န် မြင့် လာတာနဲ့ အမျှကျွန် တော်တို့ မြင် ချင် တဲ့နိုင် ငံ ရေးယဉ် ကျေးမှု ၊ ဒီ မိုကရေစီ ယဉ် ကျေးမှု စတာတွေကိုကျွန် တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာလူ့  အဖွဲ့ အစည်းမှာတွေ့လာရမှာပါပဲ။ တာရှ ည်မယ်။ ခက်ခဲမယ်။ အန္တ ရာယ်နဲ့ ကြုံရနိုင် တယ်။ ဒါတွေကိုညှိပြီးရင် ဆိုင် မယ်ဆိုတဲ့စိ တ်ဓာတ်နဲ့ ကျွန် တော်တို့ လု ပ် စရာရှိတာကိုဆက်လု ပ် သွားမှာပါ။
မေး။ ။လက်ရှိအစိုးရ သက်တမ်းကု န် ဖို့ (၃၁)လပဲလိုတော့တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအစိုးရရဲ့လု ပ် ဆောင် မှု တွေထဲကဘယ်လိုအရာတွေကိုကျေနပ် အားရပါသလဲ။ ဘာတွေက မကျေနပ် စရာဖြစ် နေပါသလဲ။
ဖြေ။ ။(က) လယ်သိ မ်း၊ ယာသိ မ်းကိ စ္စ တွေကိုသေသေချာချာ မူ ၀ါဒချမှ တ်ပြီးမဖြေရှ င်းနိုင် တာ။
(ခ) ဒီ နေ့ အထိ အလု ပ် သမားတွေရဲ့ အနိ မ့်ဆုံးလစာနဲ့ ပတ်သက်လို့ မသတ်မှ တ်နိုင် သေးတာ။
(ဂ) တိုင်းပြည်ဖွံ့ ဖြိုးဖို့ အတွက်အခြေခံ ကျတဲ့ပညာရေးပြု ပြင် ပြောင်းလဲမှု နဲ့ ပတ်သက်လို့ အစိုးရရဲ့ ထိ ရောက်တဲ့ကြိုးစားမှုမတွေ့ရသေးတာ။ ပညာရေးကဏ္ဍမှာဦးစားပေးပြီးထိ ထိ ရောက်ရောက်ရင်းနှီးမြှုပ် နှံမယ်ဆိုတဲ့လက္ခ ဏာမတွေ့ရသေးတာ။
(ဃ) လူ မျိုးရေး၊ ဘာသာရေးအခြေခံ အကြမ်းဖက်မှု တွေကိုထိ ထိ ရောက်ရောက်မကိုင် တွယ်နိုင် တာ။ ခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် တော့ဒီ မိုကရေစီ အသွင် ကူးပြောင်းရေး၊ ငြိ မ်းချမ်းမှု တည်ဆောက်ရေး ကိ စ္စ တွေမှာအချိ န် ဇယားရှိစေချင် တယ်။ တိ ကျတဲ့ Mechanism တွေရှိစေချင် တယ်။ လူ ထု ကိုသေသေချာချာချပြသင့်တယ်။ တိုင်းပြည်မှာNational Accord ရှိဖို့ အရမ်းလိုအပ် နေပြီ ။
မေး။ ။အခု လက်ရှိအဝေးရောက်ပါတီ တစ် ခု အနေနဲ့ နိုင် ငံ ရေးပွင့်လင်းလာချိ န် မှာဘယ်လိုနိုင် ငံ ရေးလှု ပ် ရှားမှု တွေ လု ပ် ဖြစ်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ကျွန် တော်တို့ ပါတီ ကိုမြေအောက်ပါတီ တစ် ခု အနေနဲ့ ရှု မြင် ရင် ပိုပြီးမှ န် ကန် လိ မ့်မယ်ထင် တယ်။ လွန် ခဲ့တဲ့အနှ စ် နှစ် ဆယ်ကျော်က ဌာနချု ပ် အဖြစ် ထိုင်း­မြန် မာနယ်စပ် မှာရပ် တည်ထားခဲ့ပေမယ့် ကျွန် တော်တို့ ပါတီ တွေ နေရာအနှံ့ အပြားမှာရှိနေခဲ့တာပါပဲ။
အခု အဲဒီ ရဲဘော်အားလုံးပြန် လည်စု စည်းပြီးမြေပေါ်မှာတရားဝင် နိုင် ငံ ရေးပါတီ အဖြစ် ပြန် လည်ရပ် တည်ဖို့ ပြင် ဆင် ကြိုးစားနေတယ်။ ကနေ့ နိုင် ငံ ရေးကိုဖြတ်သန်းဖို့ ညီ နောင် မဟာမိ တ်တွေ၊ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ အမြင် ညှိနှိုင်းမှု တွေ ဆက်တိုက်ပြု လု ပ် နေပါတယ်။ ပါတီ အနေနဲ့ တော့ကနေ့ နိုင် ငံ ရေးအခြေအနေတွေအောက်မှာပါတီ နဲ့ ဆက်စပ် တဲ့လူ ငယ်အင် အားစု တစ် ခု ပေါ်ပေါက်နိုင် ရေး အာရုံစိုက်ပြီးကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်ကိ စ္စ ၊ အခြေခံ ဥပဒေပြင် ဆင် ရေးကိ စ္စ ၊ အလု ပ်သမား လယ်သမားကိ စ္စ စတာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ တော့လေ့ လာမှု တွေ ဆွေးနွေးမှု တွေ အဆက်မပြတ်ရှိနေပါတယ်။
မေး။ ။ရွေးကောက်ပွဲမှာPR (အချိုးကျကိုယ်စားပြု စနစ် )အပေါ်ဘယ်လိုမြင် ပါသလဲခင် ဗျ။
ဖြေ။ ။ ကျင့်သုံးဖို့ စောသေးတယ်လို့ ပြောချင် ပါတယ်။
မေး။ ။ပြည်ခိုင် ဖြိုးပါတီ ဥက္က ဋ္ဌနဲ့ NLD ပါတီ ဥက္က ဋ္ဌတို့ အခု လိုတပူးတွဲတွဲဖြစ် လာတဲ့ အပေါ် ပြည်တွင်းနိုင် ငံ ရေးသုံးသပ် သူ တွေက ကြိုဆိုကြတာရှိတယ်။ လွှ တ်တော်မှာဖြစ် လာမယ့် အပေးအယူ တစ် ခု လို့ လည်း ပြောကြတယ်။ ဦးအောင် မိုးဇော်ရဲ့အမြင် ကိုပြောပါဦး။
ဖြေ။ ။ဒေါ်အောင် ဆန်းစု ကြည်ဟာ ဒီ မိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ်က နည်းနည်းလေးမှ သွေဖည်မယ့် ခေါင်းဆောင် မဟု တ်ဘူးလို့ ကျွန် တော်ယုံတယ်။
မေး။ ။အသံ ကျယ်ကျယ်လောင် လောင် ပြောနေတဲ့အချိုးကျကိုယ်စားပြု စနစ် (PR) ကနေ ညွန့်  ပေါင်းဆိုတာကိုလှ ည့်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ ဦးအောင် မိုးဇော်တို့ ပါတီ အနေနဲ့ ဆိုရင် ညွန့်  ပေါင်းကိ စ္စ ကိုဘာပြောမလဲ။
ဖြေ။ ။ကျွန် တော်တို့ ပြည်သူ တွေက ဒီ မိုကရေစီ ကိုတကယ်ဖော်ဆောင် မယ့်တိုင်းပြည်ကိုတကယ်ငြိ မ်းချမ်းအောင် ၊ ဖွံ့ ဖြိုးအောင် လု ပ် မယ့် ပါတီ ကိုပဲ ပုံအောပြီးထောက်ခံ လိ မ့်မယ်လို့ ကျွန် တော်ယုံကြည်တယ်။
မေး။ ။ပြည်တွင်းနိုင် ငံ ရေးအခြေအနေတွေအပေါ် ထပ် မံ ဖြည့်စွက်ပြောချင် တာများရှိရင် ပြောပါဦး။
ဖြေ။ ။လူ မျိုးရေး၊ ဘာသာရေးကွဲပြားခြားနားမှု ကိုအခြေခံ တဲ့လှု ပ် ရှားမှု တွေ၊ အကြမ်းဖက်မှု တွေဟာ ကျွန် တော်တို့ တည်ဆောက်ချင် တဲ့ဒီ မိုကရေစီ နိုင် ငံ ရေးစနစ် အတွက်အလွန် ကြီးမားတဲ့ အန္တ ရာယ်ပါပဲ။ အစွန်းရောက်တဲ့အမျိုးသားရေးပြောဆိုလှု ပ် ရှားမှု တွေကိုကာကွယ်ဖို့ ၊ တားဆီးဖို့ ၊ ထိ န်းသိ မ်းဖို့ ကိ စ္စ တွေဟာ အစိုးရမှာတာဝန် ရှိပါတယ်။ နိုင် ငံ ရေး အင် အားစု တွေအရပ် ဘက်လူ့  အဖွဲ့အစည်းတွေ တာဝန် သိ တိုင်းသူ ပြည်သားတွေမှာလည်း တာဝန် ရှိပါတယ်။ အားလုံးပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ပြီးထိ န်းသိ မ်းကြစေချင် ပါတယ်။ဒီ လိုလှု ပ် ရှားမှု တွေကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ အစိုးရမှာတာဝန် အရှိဆုံးလို့ ထပ် ဆင့်ပြီးကျွန် တော့် သဘောထားကိုပြောချင် ပါတယ်။
မေးမြန်းသူ – သီ ဟ
ဓာတ်ပုံ– ဂျေမောင် မောင် (အမရပူ)